Indlela ukuhlobisa amakhekhe ekhaya, uma siye safunda ukungafihli esithandweni yabo futhi manje ufuna ukubukisa ngamakhono abo futhi ngisho onekhono? Kuyinto lula kunalokho kubonakala efika kuqala. Ukuhlobisa ikhekhe ngezandla zakho ngangokunokwenzeka ne-mastic, futhi elula kakhulu futhi amathuluzi ajwayelekile - chocolate chips, candy ukukhiqizwa yezimboni, amantongomane nezithelo, imifanekiso ukhilimu. Ake sibheke izindlela eziyisisekelo zokusebenzisa leli khono ezithakazelisayo.
Indlela ukuhlobisa amakhekhe ekhaya? Siqala izisekelo: ukulungiswa amakhekhe, ukuqondanisa
Mhlawumbe ubuka yobuciko, waqasha ngu Confectioners kwe-mastic, uthola ujabule, kodwa nhlobo umqondo indlela yokuphendula lo ukuthuthukiswa kwamakhono enjalo. Okokuqala, ebaluleke kakhulu - siwukulungisa phansi. Lokho ukubhaka amakhekhe, bayibeke ukhilimu ngobumnene fluff. Lapho umgwaqo esiphelele ikhekhe - isihluthulelo sempumelelo. Ungacabangi ukuthi enamathela kwe-mastic ngeke ukufihla wonke amaphutha kanye izimbobo. Kuyinto, kunalokho, zembula. Nquma inani ukhilimu - kuyini, lo nzima ukuxazulula inkinga ukuthi ukuhlobisa amakhekhe ekhaya. Framework kufanele bube yizinombolo bhisikidi noma uju-amakhekhe - abayikho nezimo kakhulu futhi kungahlali kahle ngaphansi kwe-mastic ekwelapheni. Uma ufuna ukusebenzisa akulona ngamafutha, kepha abanye ukhilimu emnene okwengeziwe emjikelezweni ikhekhe, kubalulekile ukusebenzisa okuthiwa edamini sterner ukhilimu (base-America). Khona ikhekhe fluff ithunyelwa efrijini. Futhi kuphela ke coat ne ukhilimu oyifunayo ngaphakathi kwedamu. Uma ufuna ikhekhe lakho has a isakhiwo eziyinkimbinkimbi, kungcono ukubhaka bhotela bhisikidi futhi uma selehlile cishe ngokuphelele, akubeka, zihambisana ucwecwe, efrijini. Lolu hlaka akusho sidilike. ikhekhe eqandisiwe lula kakhulu ukwakha kuka ukuphula nezimo kubhakwa. Vele sinake emaphaketheni hermetic - eqinisweni amakhekhe kahle ukubamba iphunga esiqandisini ungalahlekelwa ukunambitheka kwako, waphumula eduze ukudla eqinile elibi (inhlanzi, amakhambi). Uma ukhipha ikhekhe efrijini, usike ngommese ukugibela phezulu ukubhaka. Ikhekhe asele ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili noma ezintathu. Hlanganisa ikhekhe nanoma iyiphi ukhilimu ibhotela. Khona-ke, kakade uphuthelwe, kubalulekile ukubeka elinye ihora efrijini. Manje kungenzeka ukunikeza ikhekhe yanoma iluphi, kuqala ukuqinisekisa ukuthi it is kahle kuqondaniswe circumferentially. Ukuze wenze lokhu, thatha nommese obukhali kakhulu, wasibeka thwi nangemifanekiso enyakazayo futhi kuye kancane kancane ukusika maholoholo. Ngemva le nqubo amaqebelengwane ukhilimu ngempela ibekwe emuva efrijini.
Indlela ukuhlobisa ikhekhe nge ushokoledi?
Ukuze ganache kudingeka ukhilimu ezinhle. Kanye eliphezulu ushokoledi ne wokuqukethwe cocoa okungenani amahlanu nanhlanu per cent. Warm ukhilimu isilinganiso elilodwa kuya kwamabili endaweni okugeza amanzi, sibhebhezela njalo. Umphumela bushelelezi futhi ecwebezelayo mass kancane beat wafaka phezu ikhekhe. Khona-ke, ngaphandle kokulinda ukuba omiswe, agudle izinhlangothi futhi phezulu. Kungcono ukwenza ungqimba double. Kuzothatha cishe ezintathu ushokoledi stogrammovyh. Manje futhi ukumisa imigqa umkhiqizo wakho. Manje wenze konke oludingayo ngaphambi kokuthi ukuhlobisa amakhekhe ekhaya. On base olungiselelwe kungenziwa umhlobiso ukhilimu, i-marzipan, jelly isicelo. Bonke kuzohlala kahle. Futhi ikhekhe nje, ushokoledi yiqhwa, amahle kakhulu nenhle.
Namafutha izinwele ukwatapheya. Ukusetshenziswa futhi isicelo